Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » kariska » Kuwani waa 2021 Magaalooyinka Cunnada ugu Fiican Ameerika
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Khamriga & Ruuxa
COVID-19 ka dib, makhaayadaha qaarkood waxay u muuqdaan inay isku dayayaan inay macaamiisha dib u soo celiyaan iyagoo ku siinaya xulasho saacad farxad leh oo aad u wanaagsan oo qiimo jaban. Cuntooyinka ku jira miisaaniyad cidhiidhi ah waa inay ka eegaan menu -yada saacadda farxadda leh qaar ka mid ah makhaayadaha ay jecel yihiin.
In ka badan 180 ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka ayaa la isbarbar dhigay sagaal iyo labaatan mitir oo muhiim ah.
Xogta la dejiyay waxay u dhaxeysaa awood u lahaanshaha iyo marin u helida maqaayado tayo sare leh ilaa xafladaha cuntada ee qofkiiba ilaa macmacaanka farsamada gacanta iyo khamriga korkooda.
Iyada oo la kaxeynayo tilmaamaha masiibada, xarumo badan ayaa sidoo kale u guuray aagagga bannaanka, kuwaas oo ay ku jiraan goobo yaryar, goobo aad isugu dhow, iyo dalbasho aan xiriir lahayn.
Iyadoo 16 -ka Oktoobar ay tahay Cuntada Adduunka Day iyo qiimaha makhaayadaha oo kor u kacay 5.4% intii u dhaxaysay Luulyo 2020 iyo Luulyo 2021, falanqeeyayaasha warshadaha ayaa maanta soo saaray warbixintooda ku saabsan Magaalooyinka Cuntada ugu Fiican Ameerika ee 2021, iyo sidoo kale faallooyinka khabiirka ee weheliya.
Si loo go'aamiyo muuqaalka cuntada ugu wanaagsan uguna jaban, khubaradu waxay isbarbar dhigeen in ka badan 180 ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka oo dhan 29 mitir oo muhiim ah. Xogta la diyaariyey waxay u dhaxaysaa awood-u-lahaanshaha iyo helitaanka maqaayado tayo sare leh ilaa xafladaha cuntada ee qofkiiba ilaa warshadaha farshaxanka iyo khamriga qofkiiba.
20-ka Magaalo ee Foodie ugu sareeya America
1. Portland, AMA 11. Los Angeles, CA
Kuwa ugu fiican iyo kuwa ugu xun
Orlando, Florida, waxay leedahay dukaamada cuntada khaaska ah ee ugu qaalisan (halkii xidid laba jibbaaran), 0.4529, taasoo 19.4 jeer ka badan Pearl City, Hawaii, magaalada ugu yar 0.0234.
Orlando, Florida, waxay leedahay makhaayadaha ugu badan (halkii xidid laba jibbaaran), 7.23, taasoo 18.1 jeer ka badan Pearl City, Hawaii, magaalada ugu yar 0.40.
Orlando, Florida, waxay leedahay jalaatada ugu badan iyo dukaamada yogurt la qaboojiyay (halkii xidid laba jibaaran), 0.3566, taasoo 49.5 jeer ka badan South Burlington, Vermont, magaalada ugu yar 0.0072.
Santa Rosa, Kaliforniya, waxay leedahay saamiga ugu sarreeya ee maqaayado adeeg buuxa leh oo laga helo goobaha cuntada degdegga ah, 1.72, taasoo 3.2 jeer ka sarreysa Jackson, Mississippi, oo ah magaalada ugu hooseysa 0.54.